ILa Bolera Ilahliwe yaGuqulwa yaya kumava obuGcisa beMeow Wolf's Izidalwa ezikwi-Intanethi
Undwendwe kwi 'Indlu yokubuya okungunaphakade' okanye ngesingesi 'Indlu yokubuya okungunaphakade', ingaphezulu kombukeli ongacacanga kubugcisa obumangalisayo bokuntywilisela obutyhileka kukuphononongwa koku ishiya i-bowling alley, apho unxibelelwano lwenkulungwane yama-21 lukuntywilisela. Yenziwe lilungu leqela elinamalungu ali-150 elibizwa ngokuba yiWolf's Meow (Meow Ingcuka)Amava enkcubeko ahlala kwindawo eyilahliweyo ye-bowling eSanta Fe, eNew Mexico. Ibe Izithuba ezingama-70 ezahlukeneyo, enye igumbi imidlalo imidlalo 14, izindlu ezine zemithi, kunye nenkqubo ye imiqolomba.
Isiseko 'seNdlu yokuBuya okungunaNaphakade' (iNdlu yokuBuya okungunaPhakade) yinto eyenzekileyo ngaphakathi endlwini Ubudala bama-Victori, kwaye into eyakhe yachithwa ngokuhamba kwexesha nendawo. Usapho lakwaSelig igcisa, umyeni wakhe ongumqambi kunye nonyana wabo omncinci ngabemi bentsomi bendlu, kunye nabatyeleli kule nkampani banokufumanisa Iindlela ezifihlakeleyo kunye neendawo ezintle. Igumbi ngalinye elibonakala lincinci lidlala kwibali elikhulu, elingelolayini. Umsebenzi kukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni kwiiSeligs.
Akukho nto isikelwe umda kwindlu yaseSelig. Umntu ngamnye unokukhetha indlela yakhe ngeenyawo ezingama-20,000 (Iimitha zesikwere eziyi-1.858), kwaye bayamenywa ukuba bahambe, bakhwele, bakhase, kwaye badlale ngezixhobo abazithandayo. Undwendwe lunxibelelana ngezinto ezinjengemithi ye-neon kunye nezidalwa ezinkulu ezikhanyisiweyo, konke ukuyakha ngokutsha imbali yeSelig.
Ukwamkelwa ngokubanzi kutyelelo 'lweNdlu yokuBuya okungunaPhakade' (Indlu yokuBuya okungunaPhakade), Yi- $ 15 yabemi baseNew Mexico kunye ne- $ 18 yeendwendwe ezingaphandle korhulumente. Nantsi igalari yemifanekiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » I-Bowling Alley Ilahliwe yaguqulwa yaya kumava obugcisa beMeow Wolf
Iimvakalelo ezinzulu kwimizobo yegcisa laseIran Afarin Sajedi